Milaza ny Venezoeliana fa tsy afaka miditra amin’ny tolotry ny Google izy ireo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2018 4:55 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, English, عربي, русский, English, Italiano, Español
Sary nataon'i Eduardo Sanabria. Nahazoana alalana.
Nandritra ireo andro voalohan'ny volana Septambra, maro ireo mpisera aterineto Venezoeliana no nitatitra fa sahirana vao tafiditra tamin'ny tolotry ny Google tamin'ny alàlan'ny mpanome tolotra aterineto tantanan'ny fanjakana, CANTV, ilay orinasam-pifandraisandavitra lehibe indrindra ao Venezoela. Toa hita fa niasa indray anefa ny tolotra tamin'ny tapaky ny volana Septambra, saingy nanambara fomba maro izay tsy nahafahan'ny mpisera aterineto nahazo vaovao sy serasera ny resadresaka.
Anisan'ireo tolotra voakasika ny Blogspot, Hangouts, Google Drive, ary ny tolotra sary, anisan'izany ny paingotra dosie Gmail.
Heveriko fa ireo namana avy ao amin'ny tolotra Aterineto haingam-pandeha (ABA) ao amin'ny CANTV no nanakana ny fidirana amin'ny tambajotran'ny Google famoahana votoaty manokana (CDN). Tsy azoko antoka ny faharetan'ny fahatapahana/fanakanana ny tolotra, saingy mifanaraka tsara izany. Manaova andrana vetivety amin'ny alàlan'ny fanokafana ny Play Store mba hahitana raha azo trohina ny sarin'ny fampiasa.
Raha tsy nisy ny vaovao ofisialy dia nanomboka nanombantombana ny anton'izany fahatapahana izany ny mpisera, ary nihevitra fa ny fanakanana niniana natao avy amin'ny CANTV no antony mety nahatonga izany.
Nilaza ny Venezuela Inteligente, vondron'ny fiarahamonim-pirenena Venezoeliana iray, fa niharan'ny fahatapahana ihany koa ny Facebook sy ny Twitter, ary nilaza izy ireo fa mety natao lasibatra ny sehatra fizarana votoaty. Tsy nanamafy anefa izy ireo raha toa ka avy amin'ny fanakanana niniana natao ity fahatapahana ity na tsia:
Hanohy hamerina hijery ny olana momba ny fidirana amin'ireo sehatra manan-danja maro amin'ny alalan'ny #CANTV izahay, maro amin'ireo olana ireo no mitranga ao amin'ny sehatra CDN (tambajotra fizarana votoaty, izay maka ny dosie iombonana haingana kokoa) TSY AFAKA MANAMAFY IZAHAY amin'izao fotoana izao raha toa ka niniana natao ny fanapahana na tsia.
Mandritra izany dia nanambara i Fran Monroy, mpanao gazety iray momba ny teknolojia fa ny fifangaroan'ny olana ara-teknika no nahatonga ny fahatapahana:
Nanazava ny mpiara-miasa iray manampahaizana manokana momba ny fifandraisandavitra @fmonroy fa manana olana roa ny #CANTV amin'izao fotoana izao ao Venezoela. Vakio ny randram-baovao.
Tsara ny manamarika fa matetika ny fahatapahana maharitra izay fahita amin'ny sampan-draharahan'ny aterineto tantanan'ny fanjakana. Tsy mitranga amin'ny fifandraisana amin'ny aterineto fotsiny ihany izany fa amin'ny tariby elektrika ihany koa .
Tsy vaovao ny fanafihana ny aterineto ao Venezuela. Anisan'ireo tranga hafa, ny volana Jona 2018, voasakana ny fitety tsy manafina anarana Tor, sy ny tranonkala mamoafady maro samihafa .
Fanampin'izany, nahita ny fanadihadiana vao haingana nataon'i Venezuela Inteligente, IPYS Venezuela sy ny Open Observatory of Network Interference (OONI) fa fanao efa miparitaka be ny fanivanana ny tranonkalam-baovao any Venezoela amin'ny alàlan'ny fisomparana ny DNS sy ny fanivanana ny HTTP.
Rehefa voasakana amin'ny alalan'ny fisomparana ny DNS ny votoaty dia tsy mamaly ny fangatahan'ny Internet Protocol (IP) ny milin'ny anaran-tsehatra. Voasakana ny fangatahana IP raha misy adiresin'ny tranonkala voafaritra manokana miditra ao anaty fitety. Mandritra izany, manakana ny fidirana amin'ny vaovao izay manana kaody fototra ahitana ny teny izay tsy raisin'ny rafitra ny fanivanana ny HTTP .
Teo aloha, nitatitra ny Venezoeliana fa tsy afaka niditra tamin'ny maridrefin'ny onjam-peo, kanefa vao haingana no tsikaritra tamin'ny fanakanana mivantana ny loharanom-baovao tsy miankina sy ny fisamborana ireo mpanao gazety ny fanaraha-maso henjana. Andro vitsy nialoha ny tatitra farany momba ny fanakanana ireo sehatra dia efa nanameloka sahady ny fanafihana ireo loharanom-baovao tsy miankina ny sehatra fampahalalam-baovao iraisampirenena .
Mandritra izany, midika ny tsy fisian'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety sy ny tsy fisian'ny fahalalahana maneho hevitra ihany koa ny famerana hafa mifandraika amin'ny krizy ara-politika sy ara-toekarena. Nanery ny sehatra famoaham-baovao maro hikatona ny tsy fahampian'ny fitaovana fototra toy ny taratasy , na ny fepetra ara-toekarena vao haingana (izay ahitana ny fampiakarana ny karama farany ambany in 60 avo heny, noho ny fiakaran'ny vidim-piainana) .
Vokatr'izany, nihena tamin'ny fomba maharitra sy haingana indrindra ny isan'ny haino aman-jery manohitra ny governemantan'i Nicolás Maduro.
Nitatitra ny fahasimban'ny fifandraisana an-tserasera any Venezuela ny fanadihadiana iray niarahana nanoratra tamin'ny mpanoratra ity lahatsoratra ity sy ny Derechos Digitales (Zo Nomerika) . Nilaza ihany koa ny fanadihadiana fa fandikana ny zon'olombelona ny famerana ny vaovao sy ny fifandraisana izay notaterina tao Venezoela ary ny tsy fisian'ny mangarahara amin'ny fampiasana ny votoaty manokana .